समाजबादी पार्टीका नेता कर्णले भने: अब भारतीयले हामीलाई छोरी दिँदैनन
June 23, 2020 by साहारा संदेश
संसदीय समितिले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाएपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू आक्रोशित भएका छन । सत्तापक्षले पेलेर अघि बढ्न खोजेको र कानुन परिवर्तनमा चित्तबुझ्दो कारण दिन नसकेको भन्दै उनीहरूले सदन र सडकमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दिएका छन । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता लक्ष्मणलाल कर्णले
नागरिकतासम्बन्धी प्रचलित कानुनमा परिवर्तन गर्न जरुरी नै नभएको बताए । यसले मधेशको संस्कृति, हिन्दु रीतिरिवाज र नेपाल-भारत सम्बन्धमाथि ठूलो प्रहार भएको छ, ’कर्णले भने, ‘विवाह भएर आएपछि महिलाको कूल र गोत्र परिवर्तन हुन्छ, सनातनदेखि चलिआएको यो व्यवस्था तोड्न किन जरुरी पर्यो ? चित्तबुझ्दो कारण चाहियो नि !
भारतीय सीमा क्षेत्रका सबै ठाउँमा नेपाली र भारतीयबीच विवाह हुने गरेको भन्दै उनले अब ठूलो समस्या आउनसक्ने संकेत गरे । ‘नागरिकता नै नपाउने भएपछि अब भारतीयले जानीजानी किन नेपालीलाई छोरी दिन्छन ? कर्णले प्रतिप्रश्न गरे, ‘सीमा क्षेत्रमा यसले ठूलो समस्या निम्तिन सक्छ । संसदीय समितिबाट झिनो मतले यो विधेयक अघि बढेको भन्दै संसदमा आफ्ना कुरा राख्ने उनले बताए ।
संसदमा पनि सत्तारुढ नेकपाको बहुमत भएकाले यो विधेयक समितिकै प्रतिवेदनका आधारमा जस्ताको तस्तै पारित हुनेछ । पेलेरै जाने रणनीतिमा सत्तापक्ष देखिए आफूहरू सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने कर्ण चेतावनी दिन्छन । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यसमेत रहेका जसपाकै अर्का नेता राजकिशोर यादवले विदेशी
बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकता दिन ७ वर्ष कुराउनुको औचित्य पुष्टि नहुने बताए । ‘पहिला विवाह गर्नासाथ नागरिकता दिँदा कहाँ-कहाँ कस्तो राष्ट्रघाती काम भयो ? अब ७ वर्ष कुराएर दिँदा चाहिँ राष्ट्रघात हुन सक्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? यादवले थाहा खबरसँग भने, ‘त्यसैले विना अध्ययन र तथ्यभन्दा बाहिर गएर गरिएको यस्तो निर्णय व्यवहारिक छैन, ७ वर्ष नै
कुराउनुपर्ने कारण के हो ? जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ। अंगीकृत नागरिकता लिनेले भन्दा बढी राष्ट्रघाती काम वंशजका आधारमा नागरिकता लिनेले गरिरहेको उनको आरोप छ । आवासीय प्रमाणपत्रको व्यवस्था संविधानले परिकल्पना नगरेको भन्दै यादवले नेपालमा नागरिकताबिना कुनै काम हुन नसक्ने बताए । ‘बरु अंगीकृत नागरिकता सुरुमै दिएर जुन–जुन अधिकार
दिँदा समस्या आउन सक्छ भन्ने लाग्छ, त्यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो’ ,विकल्प सुझाउँदै उनले थपे, ‘यहाँ त नागरिकता नभई केही काम हुँदैन, यो सरासर महिला अधिकार र मानव अधिकारको हनन हो। भारतमा नागरिकताको प्रावधान नै नभएको र त्यहाँ विवाह गरेर जाने नेपाली महिलाले सुरुदेखि नै सबै अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने उनको दाबी छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय राष्ट्रवाद खपतको विषय भएकाले कसैलाई अधिकारबाट बञ्चित गर्न र मूलधारबाट बाहिर धकेल्न यस्ता विषय उठ्ने गरेको यादवको तर्क छ । ‘राष्ट्रवादी देखिन एउटा विषय उठाउने, माहौल तताउने र त्यसैको आडमा आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्ने परिपाटी छ, ,यादव भन्छन ।
सत्तारुढ नेकपाले विकल्पमा छलफल नै गर्न नचाहेको र जबर्जस्ती पेलेर अघि बढेको भन्दै यादवले बहुमतको खेलले समस्या समाधान नभई थप बल्झिने जिकिर गरे । हामिले यो खबर थाहा खबरबाट साभार गरेका हौ ।
Prevनेता खनाल भन्नुहुन्छ:- ओलीले भन्दैमा MCC पारित हुँदैन
Nextरबि लामिछाने पत्रकार होईन तँ युटुबे होस भन्दै आए एक युवा (पूरा भिडियो सहित)